Qurbahaa qasaariyey qorshihii Jaceylkeena ‘Sheeko Jaceyl oo aad u Xiiso Badan (Qeybtii 2-aad)	| Calafka.net	Thursday, April 24th, 2014	Home
Qurbahaa qasaariyey qorshihii Jaceylkeena ‘Sheeko Jaceyl oo aad u Xiiso Badan (Qeybtii 2-aad)
Oct 11, 2012 - 1 Jawaab	ShareDeeqa oo aan waligeed horay jaceyl loogu soo ban dhigan oo hadana qiimeyneesa xaalka hanad oo taagnaa horteda islamarkaana aan ku deg degeenin jawaabtii ay siin laheyd ayaa waxa ay ku tiri .
Hanad walaal aad baad umahadsan tahay walaal waxaad isheegta miyaad leedahay wax telephone gacameed ah ama mobile oo aad adiga si gaar ah u isticmaasho.
Hanad: haa abaayo deeqa waan leyahay inkasto oo aan iminka guriga uga imid
Deeqa:walaal hanad jawaabta waxaan kuuugu soo hagaajindoonaa mobilkaaga ee isheeg numberkaaga
Hanad oo aad mooda in uu sidii hore ka xasilay ayaa deeqa si hal haleel ah ugu sheegay numberkiisa
macasalaama ayaa laysku yiri iyo in hadhow layska maqlo dhanka telephoneka Hanad wax allaaliyo wixii dunida farxad yaalay buu kulansaday oo waxa uu isku sheegay in uusan ku hungoobin talaabadii uu qaday.
hanad yare waxa uu markaan ku sii jeestay dhankii ay ka socotay ciyaarta inkastuu uu aad uga habsamay waxana ciyaarta oo maalintaasi kululeed uu ku aaday kaanbiyadii danbe waxana kooxdiisi lagulaha xoggaa goolal ah oo lagala hormaray .
garoonkii waxa soo galay markaan oo ciyaartii ku soo biiray hanad oo aad u xamaasadeesan ,guul ayuuna halkii kasoo hooyey waxana markii ay dhamatay ciyaarta ay usoo galab caraabeen xafadoodii iyago wata guul anay rajeynin ka hor imaashahii hanad.
kaftan baa la galay iyo in hanad ay asxaabtii ku yiraahdan waa maxayna saxiib firfircoonidaan zaa’idka ah ee aad galabta la soo baxday
Hanad oo an is dareensiineenin asxaaabtii baa ku andacooday saaxibayaal wad ogeedeen in aan maal mahaan ciyaarin marka qorshaheygu galabta waxa uu aha in aan dhigo wacdarahaan aad adinkaba aragteen
kaftan iyo buuq dabadeed waa lagala hayaaman nin waliba gurigiisii buu u hoyday ,Hanad oo isago marnaba balantii Deeqa aysan ka bixin maankiisa ayaa waxa uu galay qolkiisii isla markaana waxa uu soo haabtay telephonekii wax missed call ah iyo number an u save gareesneen buu daydayay haseyeesha intaba kulama uusan kulmin
waxa uu lasoo aaday dhankaa iyo sariirtiisa mar walibana waxa uu indhaha ku haayey shashaada telephoneka oo aad mooday in wax looga sheegay ama uu ka dalacanaayo suurada deeqa wax uu sidaa ahaadaba waxa ay ku noqotay waqti danbe oo habeen ah wa uu iska seexday inkastoo uusan wali quusan oo uu ku haminaayo bariteey ku soo waceysa iyo xilliga ay fursad heesho ,naftuu sabaalinayaa muddo maalmo ah buu sidaa ku jiray mana uusan helin wax wicitaan ah oo uga imaaday dhankii Deeqa.
markaan xaajadii sida uu filaayey wa ay iska badashay walbahaar iyo wel welbaa lasoo darsay waxa uuna isku yiri waa in aad galabtana aad beegsataa bartii ay deeqa degeneed .
labisbuu isku soo hagaajiyey sidii ruux labalamiyey buu isa soo udgiyey qofkii arkaana waxa u muuqaneesa inan uu Hanad meel ka balansan yahay inkastoo uu si u siloona oo an laga dheehaneenin wax farxad ah haba yaraatee.
Hanad baabuur buu soo qabsaday meel sidaa uga fogeen gurigii deeqa buu uga dagay ,talaabo aan qiyaasneen buu ku socdaa arintii buu gorfeeyneyaa tolow maxey deeqa ku soo wiici weysay oo ay kuu soo siin weysayna jawaab cad maba garan ayuu yiri .
Inyar ka dib waxa uu soo garay gurigii waxaa uu eegay hareeraha guriga misa waxa uu arkay arin uu san ku farxin ,waa Deeqa oo guriga jalbeebkiisa ku dheelsineesa dhaalaan yar qalbigii baa qac yiri dunidii baa la madoobaatay in qorixii ifeeso iyo in kalebaa Hanad shaki baa ka galay
waxaana uu go’aansaday in uusan lahadlin oo uu halkiisii kalaabto waayo waxa uu iska dhaadhiciyey waxa ay kusoo wici la’eedba waa xaas ay joogto caruur indhahaagoo ku shan ahna in aad su’aalahaa ula tagto waa wax aan qurux badneen buu ku gunuunacay
Heestii Xasan Aadan baa ku soo dhacday(Hadal waxa uu amaan yahay inta aadan oraninee )dhibta jaceylka uunbaa u muuqata waa uu iskasii luuday.
Soomaali waxa ay ku maahmaahday ‘’hubsiimo halbaa lasiistaa’’ waxba ma uusan hubsan lakiin waxa uu ku dhaqaaqay wixii markaa ula muuqday in ay saxan tahay ,Hanad oo markaan aad u madluunsan baa waxa uu ku laabtay aqalkiisii.
Sariirtiisii buu isku tuuray asagoon iska bixin dharkii iyo waliba kabihii uu ku aaday magaalada waxa uu canbaar ka dib uu taabtay dhabanadiisa mase ilin ayaa ka hooreesa waa uu iska tirtiray mar qora waxa niyadiisa kusoo maaxday heestii ciirsi (Carabkiyo Indhaha iyo Calooshaad dhex Miratoo Cadow aad ku noqotoo howlo aad ku curisee kalgceelka ciidami cusliyoo horseedoo anna yaanu iceebeen wallee ciil sideeydoo calafiyo wad mooyee mid kale ma caashaqo) .
Waxa uu is gashtay laabtiyo jilbaha isagoo markaan quustay jaceylkuse uu yahay mid luraayo kana dhigay kali ku baroorta sariirta wayoow Waay.
Deeqa oo iyadu galab waliba soo fariisan jirtay ilinka guriga howsheedii bey ka raacatay oo wa ay iska ilaawday balantii inyaraale dabadeed waxa ay aragtay koox dhalinyaro ah oo u socota ciyaar.
waxaa maankeedii kusoo dhacay balantii Hanad iyo sida sahalkaah ay ku ilaawday weeydiimo latashi iyo war celin ka dib oo ay iyadu isla sameesay waxa ay hoos ka xariiqday in ay Hanad la sheeko wadaagto oo yoolkiisa ay ogaato run iyo been waxa uu yahay arinka Hanad.
waxa ay baar baartay halkii ay ku qortay numberkii Hanad waxa ay soo xasuusatay in ayba ku qoratay telephonekeeda oo ay galabtaa gacanta ku heesatay.
waa ay wacday Telephonekiibaa u dhacay inta uu telephoneka dhacaayo waxa ay isku leedahay tolow sideebaad ula hadli doontaa maadaama aadan waligaa arimahan oo kale aysan kula soo gudboonan madamisaa mase waad la hadasha ,waxa ay isku tirtirsiisay in ay oofiso balanteeda oo wax waliba haku qaadatee ay la hadasho Hanad oo isagoo jawaab ka sugaya
Hanad waxa uu ku dhex jiraa muujado darxumiyo dhibaato ah waxa uu halmar kusoo maxaay telephonekiisa uu dhacaya.
hanad ayaa yiri: dadkaan waa ay iska kaasoo wacayaan maba ka war hayaan xaladan aan ku jiro ma uusan qaban oo gacanba uma taagin dhibaatadiisa ayaa u cad waxbaa ku dhex miranayaa oo uusan garan micnahooda sababtase uu u arkaayo waxii ay indhahiisu soo qabteen
Deeqa waxa ay ka yaaban tahay sababta aan loo qabaneenin telephoneka kama aysan caajizin ku cel celintiisa.
Hanad oo dhibsanayaa qeylada mobileka ayaa u dhaqaaqay dhankii uu yaalay oo aan sidaa uga fogeen waa uu eegay maahan number uu horay u arkay asagoo xanaaqsan codkiisana uu ka muuqdo caro balaaran ayaa qabtay kuna yiri
Deeqa:haa hellow ma Hanadbaa
Hanad:haa walaalo waa hanad ee waa tuma
Deeqa: walaal hanad waa Deeqa see tahay iwaran xaladaada
Hanad; ayaa aad ugu farxay maqalka deeqa waa uu is dajiyey kursii agtiisa ahaa buu fariistay waxana uu ugu jawaab celiyey:
Abaayo Deeqa waan fiicanahay ee adiga dhankaaga iwaran?
Deeqa: Hanad aad ban kugu fiicanahay aboowe waxaan kaa raali galinayaa in an kasoo dahay oo aad adigana isugeeysay hase ahaatee galabata ayaan ku wadaa jawaabtii walaal Hanad horta aniga waxan ahay inan dhigata school waligeyna cid maan lasameenin arimo xirir jaceyl (hadalka marka ay intaa marsiineeysay baa hanad laga siibay xanuunkii oo iidlaa murugadiisana farxadbey isku rogtay mobileka ayuu si saani ah ugu hayaa dhagtaa hadalkeeda uunbuu dhuuxayaa)
Deeqa oo hadalkeedii wadato ayaa usii raacisay: aboowe gorfeen iyo latashiyo aan la sameeyey nafteydana waxaan soo go’aansaday in aan kula wadaago xiriirkii aad isoo bandhigatay waxaana intaa aan kugu sii darayaa Hanadow in an donayo in berito aan ku kulano gurigeena si aan waxyaabo badan uga wada hadalno haddii aad fursad heli karto mahadsanidna aboowe.
Hanad inta ay Deeqo wado hadalka waa uu aamusnaa waxa uu aad umacaansanayaa codkeeda iyo sida xishoodka dumarnibo oo ay ku liifaaqsan tahay caqligeeda uu RABBI ku maneeystay miizaananta iyo horu dhaceeda wanaagsan ayaa markii ay hadalkeedii dhameysatay ku yiri.
Hanad: abaayo Deeqa aad mahad umahadsan tahay runtii farxadeyda mid la qiyaasi karo mahaan jawaabtadana waa mid aan sugaayey hasoo daahdo amaba hasoo deg degtee abaayo si aan kugu mahad celiyo ayaanba aqoon la’ahay abaayo hadalkii ayaa iga kala lumay xittaa lakiin inta harsan waxan dhameys tiri doonaa berito insha’allaah .
Waxa uuna macasalaamo uga dhigay ereyo uu horay uga maqlay fanaan somaliyeedoo aheed ‘
Hanad iyo Deeqa ma kulmi doonaan ?Hadii ay kulmaan maxey kawada hadli doonaan ,Xaalkooduse sidee buu ku dambeyn Doonaa Lasoco Qeybta 3-aad ee Sheekada Jimcaha soo socota Insha Allah
zakisin says:	November 22, 2012 at 6:41 pm	wax jiro ma aha